Ingcindezi enikezwa izingane inkulu kakhulu! : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-9 December 2019	• 16 Amazwana
Ezinganeni ezisezikoleni zamabanga aphansi nentsha kumele ibe nengcindezi enkulu manje yokuthi othisha abagcini nje ngokubatshela ukuthi sebengakwazi ukukhetha ubulili babo, kepha ubunzima besimo sezulu nawo budala ingcindezi yeqembu. Uma kucishe kube yindlela yokuphambuka ejwayelekile ukuba ngowobungqingili, bese kuthi kule minyaka edlule kufakwe umbono wokuthi usengabukhetha ubulili bakho futhi ubuguqukele.
Ingcindezi yeqembu lakamuva livela kwizishoshovu zesimo sezulu (I-FFF, 666). Futhi ungasho ukuthi kunothisha abaningi abahlanjululwe ngengqondo abanomthelela ekufakeni ingcindezi esizukulwaneni esisha kunazo zonke. Zilungiselelwe lokhu kuxhashazwa kwengqondo. Noma ngabe yiliphi iphephandaba olivulayo: zigcwele inkulumo-zezulu futhi lapho ubheka noma ulalela khona, amanga alethwa njengeqiniso. Lokho kulula kakhulu uma unayo yonke imishini yokuphrinta ephaketheni lakho; lokho akuhlukile eChina kunentando yeningi yethu yeningi. Uma usiphinda kaningi ngokwanele, wonke umuntu uzokukholwa. Futhi uma futhi uqinisekisa ukuthi ungadlulisa umuzwa wokuthi "awuyena" ekilasini noma emsebenzini, khona-ke ingcindezi yeqembu izonakekela i-push yokugcina.
Ifomula yempumelelo ibonakala ihlanganisa ukukhombisa amagrafu ambalwa ahambisana nokuphawula okuthi "Lalela ososayensi be-IPCC be-UN". Umgomo wazisa izindlela, kepha umshini wenkohliso wenza bobabili izingane kanye nabantu abadala bakholelwe ukuthi lezo zindlela ziyadingeka ngoba uma kungenjalo siyaphela. Futhi umshini wenkohliso uhlala uqhamuka nento entsha. Manje sinakho futhi izindawo ezifile olwandle, lapho kungekho oksijini owenele futhi izinhlanzi ziyafa.
UDavid Attenborough cishe uzokwazi ukuqondisa umbukiso omuhle wamanga. Usevele wakwenza lokho ngenqwaba yamabhere we-polar (bheka lapha) futhi futhi ngama-walruse kwakukhona ubufakazi bokukhohlisa nokukhohlisa (bheka lapha). Zombili lezi zinhlanga zibonakala zikhula esikhundleni sokwehla, ngakho-ke kukho konke lokhu akukho okuqothulayo ngenxa yokuncibilika kweqhwa. Okwamanje, zonke izizwe zisebenza engadini kule nkulumo-ze, ngoba uDavid uyakwazi ukuyikhuluma kahle ngekhamera ngesiNgisi esiwohlokayo. Yize kunjalo, angazibiza ngoMnumzane kanye nabaHlazi be-oda eliyimfihlo bangaqambi amanga! Cha, zingabantu abaphakeme futhi abaqambi amanga, banezimfihlo kuphela.
Manje usunazo zonke izinhlobo zamaqembu wesimo sezulu afaka ingcindezi enkulu esizukulwaneni esisha. I-Greta Thunberg mantra "Kufanele silalele ososayensi" isikhumbuza isikhathi umkhulu wakhe owasiza ekumiseni iKomidi Lokunikezwa Kwemiklomelo kaNobel futhi wazinikeza yena nabangane bakhe besayensi uMklomelo kaNobel. Funda ukuthi le Sentie Arrhenius (ngemuva kokuqanjwa igama likayise kaGreta uSvante Thunberg), wayengumqambi womqondo wokushisa komhlaba ngokushiswa yi CO2. Ukuthi uthole uMklomelo kaNobel ngakho-ke akubanga ngenxa yokuchaneka kwesayensi kwemibono yakhe, kodwa iqiniso lokuthi angazinikeza lowo mklomelo.
Ngendlela, ukhokho kaGreta wayebuye amele ama-eugenics futhi ngenxa yalokho wayenemibono efana naleyo yamaNazi maqondana nobumsulwa bohlanga. Wayefuna ukunciphisa inani lomhlaba. Ngakho-ke lapho uGreta ethi kufanele silalele ososayensi be-UNCC ye-UN, kubukeka njengokuphindaphinda kwalokho okwenziwe umkhulu wakhe omkhulu. Uhambise imiklomelo yesayensi kubangani bakhe kanti abanye babekwa eceleni. Ososayensi abasichazela ukuthi i-CO2 ayikwazi ukufudumeza umhlaba nayo ayizwakali. Kufanele silalele ososayensi abakhethiwe. Imali nomsebenzi wokuziphilisa wawusubaluleke kakhulu ekunqumeni kobaba obukhulu, futhi kusasebenza nanamuhla.
Ingcindezi yezingane inkulu! Cishe kufanele ube yisishoshovu sesimo sezulu uma ungafuni ukuwela ngaphandle kwesikejana. Futhi uma othisha bekutshela ukuthi umhlaba uyafudumala futhi utholakala kuwo wonke amaphephandaba, khona-ke ngeke usakwazi ukukuphika. Ikakhulu lapho "intombazane encane emnandi enama-braids" yenza konke okusemandleni ayo yonke indawo. Akekho obonakala eqaphela ukuthi le Greta Thunberg ivela emndenini ohlonishwayo owayenaleli cebo eshalofini amashumishumi eminyaka futhi ukukhetha kwakhe isayensi kwakubaluleke ukwedlula amaqiniso. Ulungiselelwe le ndima yokusakaza inkulumo-ze.
Ungazazivikela kanjani izingane zakho kulokhu kuhla kwesisindo? Uma ungibuza? Akunjalo. Cishe akunakwenzeka! Siphokophele esikhathini lapho i-sezulu hysteria izophakanyiselwa phezulu kangangokuba izoba uhlobo olusha lwe-fascism kumaskhi "wokusindisa iplanethi." Lokhu kuzokwengezwa kuze kufike ezingeni lokuthi noma ngubani ongakholelwa ukuthi uMhlaba uyafudumala ngenxa ye-CO2 futhi namanje akakholelwa ukuthi sizofa ngaphandle uma kungekho zinyathelo ezinzima ezilandelwayo ezizokuthola ukubanga uzungu. Lokhu kuzoxhunyaniswa nokuphazamiseka kwengqondo, lapho uzodinga ukunakekelwa kwengqondo. Amakamu wokuphinda afundiswe kabusha esigqokweni seGeorge Orwell isihloko segama lezindaba 'ukunakekelwa'.
Izingane ezinemibono eyehlukene zizothola ingcindezi enkulu ngokwengqondo. Lokhu bekulokhu kwenzeka ngenkulumo-ze yokushintshwa kobulili futhi manje izokwenzeka nangesimo sezulu esishisayo. Nabo bazokwenza unengqondo nesihlava 'sokulengiswa emapulazini' ngakho-ke 'ukunakekelwa' nemithi kuzonqunyelwa.
Sibona ukwethulwa kwe-fascism entsha ngaphansi kwefulegi lomnyama; ngokusebenzisa "isidingo sokugcina isimo sezulu". I-swastika ivule indlela yomnyama (bheka lapha). Sibona umbhalo omkhulu wohulumeni wezwe waseLuciferian lapho kwenziwa. I-Lusifa kanye nothingo kuxhunyiwe ngakunye. Ama-rainbow angama-professional (akhokhelwayo) abamba imvula e-Greenpeace ahlanganiswe kuzo zonke izingqimba zomphakathi futhi aqukethe isizukulwane esincanyana kunazo zonke ezimfundisweni zikaLucifer. Uthingo luwuphawu lwamasosha kahulumeni waseLuciferian. Funda incwadi yami entsha ukuze uthole ukuthi lokho kufakelwa ini umbhalo omkhulu; ukuthi umhlaba uholelwa kanjani kwi-transgender transhuman nokuthi yini esisakwazi ukuyenza.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: ad.nl, lnglangeforfuture.com, ericmaisel.com
Inkulumo ka-Greta Thunberg UN ikhumbuza 'izingane eziphonswe ngaphandle kwe-incubators' empini yase-Iraq
Isimo sokubonisa isimo sezulu ngesimo sezulu IHague ifakazela ngokwanele
Uthingo lumele inkolo enamdlandla ngenkathi abasekeli becabanga ukuthi balwela 'ukuhlukahluka nokuzibandakanya'
Amathegi: CO2, wobushiqela, afakiwe, global, Greta, isimo sezulu, Isimo sezulu, ukufudumeza, u-rainbow, Thunberg, afudumele
9 December 2019 ku-11: 12
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi le ntokazi ibe odokotela bengqondo?
9 December 2019 ku-11: 29
Futhi funda lokhu:
10 December 2019 ku-00: 57
Masibe nethemba lokuthi uyiqiniso, ngoba ngicabanga ukuthi kuyinto eyenzakalelayo ukuthi le ntombazane manje iqhutshelwa phambili ngqo ngenkathi kusolwa umthwalo omkhulu (ofanelekile) ngokugxeka kwakhe uGreta Thunberg. Ngabe manje ilungelo selinikeze eyalo 'mascot' yayo ukuze iphazanyiswe, futhi ngemuva kwesikhashana kudalwa uhlobo lokuthuka noma 'ukukhipha isizungu' ngakuNawomi lo?
Lokhu kungukucabanga kwakho okungaphezulu, uMartin (bona ukuthi ubhale ini mayelana noRobert Jensen phakathi kwabanye). Ngiyaqaphela ukuthi izindatshana zakho kanye nencwadi enhle kakhulu kungenza ngibe nokungabaza kakhulu kunangaphambili, futhi angisho ukuthi ngendlela engemihle. Kuyadingeka, ngoba ukuthuthuka okwesabekayo kwalesi sikhathi kuya ngokuya kukhula, futhi ukubiyela in ngokusebenzisa imithombo yezindaba engamanga kubukeka sengathi kuya ngokuya kuhlanya nsuku zonke.
10 December 2019 ku-01: 52
Bengicabanga okufanayo ngalokho. Ngakho-ke ukuphawula kwami ​​kuvidiyo.
Ikhamera ye-2 wabhala:
10 December 2019 ku-20: 49
Uma usunokusola okuncane futhi usenethemba lokuthi isondela ubuqiniso kodwa ungaqiniseki, khona-ke izinzuzo zokungabaza sezivele zisusiwe.
UNawomi, ntombi kaNawomi Fake, Intombazane Yomkhohlisi (a Greetaatje ye-YouTube)
UWilfred Bakker wabhala:
9 December 2019 ku-11: 43
Ngiyabonga Mnu Vrijland
9 December 2019 ku-12: 44
Uma uqhathanisa i-swastika nothingo, i-ajenda ayilungile.
I-swastika yayizokwehluleka ngokulandela i-ajenda, hhayi ifulegi lomnyama, akunjalo?
Noma kufanele sikuhumushe ngendlela yokuthi i-swastika ingachithwanga ukuqedwa kanye nomthetho Isixazululo senkinga futhi ngenxa yalokho sashintshwa ifulegi le-UN / i-Rainbow
9 December 2019 ku-12: 50
Ukuze uthole impendulo yalowo mbuzo, funda isihloko esixhunyiwe. Kuyo ngiyichaza ngokuningiliziwe.
9 December 2019 ku-19: 31
U-swastika wadlwengulwa nguHitler, kodwa besivele sazi ukuthi ama-freemasons anele ukusonteka .. Manje into efanayo yenzeka uthingo. Imvelaphi yalezi zimpawu zinhle kepha zidlwengulwa ngokuphelele futhi ziphendukezelwa ekubeni zimbi nokucindezelwa. Ngaleyo ndlela, bobabili bayehluleka ukwenza lezi zibonakaliso ngamabomu.
Lokhu-ke kungimele ukuthi ngivumelana noMartin ukuthi singabaza ukungabikhona kwethu kabusha kwezikhukhula. Uma ukudalwa bekuphelele, ukusetha kabusha akudingekile.
9 December 2019 ku-22: 35
Uma ufunda incwadi yami uzobona okushiwo yilokho uthingo futhi uzoqonda ukuthi imikhumbi yesono ezayo izobukeka kanjani.
9 December 2019 ku-19: 39
Ngiyethemba ukuthi abantu abaningi bafunda lokhu ,, futhi ikakhulukazi intsha.
9 December 2019 ku-19: 51
Akugcini lapha. Konke kuyinqaba okubonayo kumbono we-tel (lie). Bonke bangabadlali (kusuka kwimibhikisho kuya kwabezombusazwe kanye nalokhu okubizwa ngokuthi ukuhlaselwa). I-apula elimuncu .. Kepha empeleni konke kuyamanga futhi kusetshenziselwe i-ajenda!
10 December 2019 ku-04: 09
Khuluma ngobusha, ubusha ne-swastika.
Ngabe sibabona bemasha futhi, kuphela bephethe uthingo emahlombe abo? Ngabe umlando usaziphinda? 'Iziteleka zesimo sezulu' zigudla izitshudeni ezingathathi ntweni. Izimpi zesimo sezulu saseGreta's Greenpeace, Ukuqothula Ukudilika njll kwenza ukwesaba okubi kakhulu:
'I-X XUMUMX Dezember 1 iveze uHitler das Gesetz zu Hitler-Jugend. UDarin wayelapho iminyaka enguJunge ab i-Alter von 1936 eminyakeni eyi-HJ körperlich und geistig im Sinne yeNazi yamaNazi unterrichtet und ausgebildet yaba müsse. '
Faka esikhundleni i-H nge-K ye 'Climate', kanye ne-'10 'nge-'4', futhi uyisebenzise emantombazaneni, futhi sinencazelo eqondile yohlelo lwenkulumo-ntetha lapho intsha yanamuhla igxunyekwe futhi ilungiselelwe ukwenza okuphikisana no abantu 'abangalungile' abathi, ngezimoto zabo, izindiza nokushisa igesi, kungenzeka babangele 'ukuphela komhlaba' eminyakeni ye-10.
12 December 2019 ku-13: 38
13 December 2019 ku-21: 31
Ngaphandle craziness? Cha, lokho kuhloselwe ihlaya.
Kepha uSophia omncane ovela kumarobhothi waseHanson usemkhiqizweni futhi ofaka i-AI enhle nezinqubo zokufunda ezingokomzwelo (umtshalizimali we-Epstein).
30 December 2019 ku-00: 02
Emo Sakhiwo !!! ???
Ingane encane ikwazi kangcono ukuvusa imizwa ukwedlula umqondisi omkhulu wayo
alikho iqhwa eminyakeni eyishumi? ha ha ha
« Esimweni samaphoyisa, ufuna ukuvinjelwa kwamaphoyisa wokuthwebula ukuqhafaza kanye nabahlinzeki "bokusiza"
Umeluleki wezepolitiki uhlongoza ukwakha amakamu okufunda kabusha! »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.876.193
ILibya ihlinzeka ngokusobala ngokuthi imaphi amazwe eYurophu azoba ngabokuqala ukuthathwa yiTurkey
SandinG op ILibya ihlinzeka ngokusobala ngokuthi imaphi amazwe eYurophu azoba ngabokuqala ukuthathwa yiTurkey
Ukushona kwelanga op ILibya ihlinzeka ngokusobala ngokuthi imaphi amazwe eYurophu azoba ngabokuqala ukuthathwa yiTurkey
UWilfred Bakker op ILibya ihlinzeka ngokusobala ngokuthi imaphi amazwe eYurophu azoba ngabokuqala ukuthathwa yiTurkey
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op ILibya ihlinzeka ngokusobala ngokuthi imaphi amazwe eYurophu azoba ngabokuqala ukuthathwa yiTurkey
UWilfred Bakker op Indoda enguTransgender izala ingane yomlingani okungeyona eyakhe kaningi enikela ngesidoda sowesilisa